इतिहासमा सीमित हुँदै माओवादी : RajdhaniDaily.com - इतिहासमा सीमित हुँदै माओवादी
Home बिचार इतिहासमा सीमित हुँदै माओवादी
नेपालका कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक इतिहासमा धेरै उतारचढाव यसले पार गर्दै गर्दा पटकपटक विभाजित भई नेपालका कम्युनिस्टहरू फुटको पर्याय बनेका छन् । प्रायः सबै साना साना टुक्रामा विभाजित हुनुमा यी दलहरूमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलन र द्विविधा नै प्रमुख कारण बनिराखेको छ, कमरेड पुस्पलालबाट डा. रायमाझी अलग्गिनुदेखि प्रचण्डबाट डा. बाबुराम, मोहन वैद्य, विप्लव आदि अलग्गिनुसम्म र हालको सत्तारूढ दलमा भएको कचिंगल सबै व्यक्तिवाद र अवसरवादमा आधारित देखिएको छ । नेपालका साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्नेहरू माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका नाममा अघि बढेको दाबी गरिरहँदा उनीहरूको शासकीय शैली र चरित्र कहिले पनि मालेमावादप्रति इमानदार देखिएन । स्वार्थ लोलुप झुन्डको आधारमा गुट उपगुटको सिर्जना गरी अवसर प्राप्तिमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नु नै यिनीहरूको अभीष्ट साबित हुँदै आएको छ । कम्युनिस्ट नारा दिएर पुँजीवादी शैलीको शासन र चरित्र प्रदर्शन भइराख्दा जो कोही इमानदार कम्युनिस्टलाई यी दलहरूमा निरन्तरता दिन कठिनाइ परिराखेको अवस्था छ । नेपालका कम्युनिस्ट कार्यकर्ता रहँदासम्म इमानदार र नेताको हैसियत बनाउँदाको अवस्थामा सिद्धान्त र कर्तव्यच्युतसमेत बनेका छन् ।
नेपालका माओवादीहरूको दुरवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्नुपूर्व यस दलमा देखिएका विभिन्न कालखण्डका क्रियाकलापको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एंगेल्सले सन् १८४० मा प्रतिपादन गरेका यस सिद्धान्तलाई माओत्सेतुंगले आफ्नो परिवेशमा समयसापेक्ष हिसाबले पुनः परिभाषित गरे, भारतमा महात्मा गान्धीले नेतृत्व गर्नुभएको अहिंसात्मक आन्दोलन र चीनमा माओले प्रारम्भ गरेका सांस्कृतिक क्रान्ति दुवै सफल हुँदा नेपाल पनि राजनीतिक हिसाबले प्रभावित बन्न पुग्यो । नेपाली कांंग्रेससँगको राजनीतिक मनमुटावको कारणले कमरेड पुष्पलालले कलकत्तामा नेकपाको स्थापना सन् १९४९ मा गरेका थिए । सबै साम्यवादको नाममा नेपालमा राजनीति गर्नेहरूमा सैद्धान्तिक विचलन आउने कारणमा माक्र्सले वर्गविहीन र राज्यविहीन सिद्धान्तको परिकल्पना गर्नु पनि हो । आजका साम्यवादी देशहरू प्रायः सबै मालेमावादमा स्थिर भएर अघि बढ्न सकेका छैनन् । अहिले शक्तिसम्पन्न साम्यवादी देशको रूपमा उदीयमान चीनमा पनि माओत्सेतुंगको भन्दा उदार साम्यवाद अथवा २१औं शताब्दीमा सुहाउने समाजवादको कार्यान्वयन भइराखेको छ । नेपालमा सबै दलहरू भारतीय राजनीतिबाट प्रभावित भइराखेका छन् । यही क्रममा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको विकाससमेत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीकै सहयोग र प्रभावमा भइराखेको छ । नेपालमा कम्युनिस्ट दलको स्थापनाको प्रेरणा नै नेपाली कांग्रेस सँगसँगै जान नसक्ने निर्णय पुष्पलालले लिई हुन पुग्यो । एकै ठाउँ रहेका रायमाझी राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा गरेको ‘कु’बाट अवसर प्राप्त गर्न पञ्चायत प्रवेश गरेका हुन् । त्यसैले नेकपाको स्थापना नै फुटबाट श्रीगणेश भएको थियो, आजसम्म यस प्रवृत्तिले निरन्तरता प्राप्त गरिराखेको छ ।
अब नेपालका माओवादीको राजनीतिक क्रियाकलापका वारेमा केही उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । नेपालका साम्यवादीहरू कट्टर माक्र्सवादी लेनिनवादी, माओवादी, संसदवादी र लोकतन्त्रवादी हुँदै आफूलाई वामपन्थी भएको दाबी गर्दछन् । मालेमावाद लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन, एकतन्त्रीय, सर्वसत्तावाद र तानाशाहीतन्त्र यसको स्पस्ट कार्यदिशा हो । नेपालका कम्युनिस्टको सैद्धान्तिक विचलन यहीबाट प्रारम्भ भएको छ । सिद्धान्ततः सवैले सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरिराखेका छन । तर, हरेक मुद्दा र राजनीतिक घटनाक्रममा सिद्धान्त अनुकूलको अडान स्पस्ट हुनसकेको छैन । २००७ सालको उपलब्धिको कडा विरोध गर्ने कम्युनिस्टले २०१५ को निर्वाचनमा भाग लिए, जुन तर्कका आधारमा विरोध भएको थियो । त्यसको समाधान ननिकाली निर्वाचनमा सहभागिता दिइएको थियो । महेन्द्र राजाको २०१७ सालको कदमलाई पुष्पलाल समूहले विरोध र रायमाझी समूहले समर्थन ग¥यो । रायमाझीले लामो समयसम्म पञ्चायत शासनमा सुविधा भोग गरे । भारतको नक्सलवादी आन्दोलनको नक्कल गर्दै १९६२ मा झापा विद्रोहका नामले अस्तित्वमा आएकोमा तत्कालीन शासनले सहजै नियन्त्रणमा लियो । मोहनविक्रम सिंह र निर्मल लामाले नेतृत्वमा गरेको चौम नामको अर्को समूह देखियो । यसले प्रारम्भमा २०३६ सालको जनमत संग्रह बहिष्कार गर्ने निर्णय लिएकोमा पछि सहभागिता दिएको थियो । सन् १९८३ मा आइपुग्दा यो दल पनि मसाल र मशाल गरी दुई दलमा विभाजित भई ‘श’को नेतृत्व मोहन वैद्यले गरे ।
संस्थापकलाई गद्दार भन्ने, उनकै फोटो पूजा गर्ने, यी सबै क्रियाकलापले नेकपाका नेतृत्व पंक्तिमा चरम अवसरवाद हाबी भएकोमा संदेह रहँदैन
मशालले काठमाडौंको एक प्रहरी पोस्टमा आक्रमण गरेकोमा असफल भयो । संयुक्त जनमोर्चाले २०४६ सालको उपलब्धिको समर्थन ग-यो तर राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान सभाको माग गर्दै विरोध ग¥यो । सन् १९९० मा एकता केन्द्र गठन भई प्रचण्ड महासचिव भए र २०४८ सालको निर्वाचन बहिष्कार गरे । २०४८ सालको निर्वाचनमा संयुक्त जनमोर्चाले नौ स्थानमा मात्र विजय हुने अवसर पायो । एकता केन्द्रले निर्वाचनमा जाने निर्णय सन् १९९१ मा लियो । प्रचण्ड र निर्मल लामाले भिन्न दलहरू गठन गरे । डा. बाबुरामको दललाई निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि प्रचण्डसँग मिली मध्यावधि निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय लिए । दलित मुक्ति मोर्चा एकता केन्द्रको भातृ संगठनको रूपमा अस्तित्वमा आई जनसेवा र मितेरी अभियानको प्रारम्भ गरे यो नै १० वर्षे सशस्त्र युद्धको तयारी थियो । सन् १९९५ मा एकता केन्द्रको नाम परिवर्तन भई नेकपा माओवादी राखियो र संसदीय पद्धतिलाई समूल समाप्त गर्ने निर्णयसहित सशस्त्र संघर्ष गर्ने तयारी ग¥यो । संयुक्त जनमोर्चा नेपालको नामबाट ४० बँुदे माग सरकारसमक्ष राखी सो मागप्रति सरकार उदासीन भएको भन्दै जनयुद्धको प्रारम्भ ग¥यो । युद्धमा जाने क्रममा र युद्धरत् अवस्थामा समेत सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई धेरै प्रकारका मीठा सपना बाँड्ने काम भयो, जनसमर्थन जुटाउँदै आधार इलाकाको विस्तार गर्ने जनयुद्धको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्दै समाजमा आतंक सिर्जना गरी आफ्नो पक्षमा समर्थन गर्दै युद्धमा सहभागी गराउने रणनीति लिन पुग्यो, माओवादीको जनयुद्धमा जनतासमक्ष राखिएका एजेन्डाहरूबाट दल पुरै विपरीत बन्दै गयो ।
भारतको फरिदावादमा सन् १९९८ मा गुरिल्ला क्षेत्रको आधार इलाका निर्माण गर्ने निर्णय लियो । सन् २००१ मा भएको पन्जाब सम्मेलनले प्रचण्डपथको निर्माण ग¥यो । यसले माओवादीभित्र उदार र कट्टरपन्थी गरी दुई धारको सिर्जना गर्दै मोहन वैद्यले कट्टरपन्थी र बाबुराम प्रचण्ड उदारवादी कित्तामा विभक्त भए । गणतन्त्रको माग राख्दै ज्ञानेन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सहभागिता दिने परस्पर विरोधी र विवादास्पद निर्णय गरे । माग पनि पूरा भएन र सरकारमा जान पाएनन् । विक्षिप्त भएका प्रचण्ड बाबुरामले गणतन्त्रको मागराखी राउन्ड टेबल वार्ताको प्रस्ताव गरे । राजा ज्ञानेन्द्रसँग आतंकित बनेका माओवादीहरू बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा भाग लिई २१औं शताब्दीको जनतन्त्रको अडान नछाड्ने निर्णय लिन पुगे । सन् २००४ मा फुन्टिबाङमा भएको सम्मेलनमा विवाद चर्किदै जाँदा वैद्य समूहले भारत र बाबुराम, प्रचण्ड समूहले राजतन्त्रलाई शत्रुशक्ति मान्दै, प्रचण्ड र बाबुरामलाई भारतको एजेन्टसम्मको आरोप लगाइयो ।
ज्ञानेन्द्रले सत्तासभाले पछि बल प्रयोगबाट सत्ता प्राप्त गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगी चुनबाङ बैठकले बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने, संसदवादीसँग सम्झौता गर्ने निर्णय लिई तत्पश्चात् संसद्वादी र द्वन्द्वरत पक्ष सबै एक भई दिल्लीमा १२–बुँदे समझदारी गर्न पुगे । बृहत् शान्ति सम्झौता गरी माओवादी ८३ स्थान लिई पुनःस्थापित संसद्मा प्रवेश गरे, पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुगी सरकार गठन गर्न सफल भयो । सरकारमा पुगेपछि कार्यकारिणी राष्ट्रपतिको माग माओवादी हरूले राखी अघि बढ्दा अन्य दलहरूले अस्वीकार गरिदिए । प्रधानमन्त्रीलाई अन्य दलहरूले असहयोग गर्दै गर्दा तानाशाहीतन्त्र चलाउने उनको विचारले सेना प्रमुखलाई हटाई आफू अनुकूलको सेनापति बनाउने प्रयाससमेत असफलभई प्रचण्डले राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । सन् २००८ मा खरिपाटीमा भएको भेलामा दुई समूहबीच तीव्र विवाद भई जनताको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय लियो । असन्तुष्ट बनेका मातृका अलग भए, सन् २०१० मा पालुंगटारमा भएको सम्मेलनमा तीनवटा प्रतिवेदन पेस भए सबै समूहलाई शक्तिको उपयुक्त भागबन्डा हुनुपर्ने यस विवादको मूल कारण थियो । यसप्रकार सधैं शक्तिमा पुग्ने लालसाका कारण थुप्रैपटक यस दलभित्र विभाजनको अवस्था आइपरेको प्रस्ट छ ।
दलीय द्वन्द्वका बीचमा किरण समूह, विप्लव समूह आदि छुट्टै दलका नाममा राजनीति गर्दै जाँदा बाबुरामले प्रचण्डसँग निरन्तरता दिन नसकी प्रतिवर्ष दलबदल गरिराखेका छन । प्रचण्डजीमा देखिएको चरमसत्ता लिप्सा र सैद्धान्तिक विचलनका कारण उनको राजनीतिक साख गिर्दो छ, नेतृत्व तहका सीमित अवसर प्राप्त गरिराखेका बाहेक सबैले उनको साथ छाड्दै गएका छन् । परिवारको साँघुरो घेराभित्र उनी सीमित भएका छन् । कार्यकर्ता स्तरमा उनी अत्यन्त आलोचित छन्, त्यसैले बाध्यतावश एमालेसँग एकता गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन् ।
नेपालका साम्यवादी ब्रान्डमा राजनीति गर्नेहरू माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादका नाममा अघि बढेको दाबी गरे पनि शासकीय शैली र चरित्र कहिल्यै पनि मालेमावादप्रति इमानदार देखिएन
अत्यन्त कमजोर स्वास्थ्य अवस्था भएका ओलीजीको प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता हुन नसक्ने र त्यसपछि आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने सपना पालेका प्रचण्ड यत्तिखेर दलभित्रको कचिंगलमा नराम्ररी फस्दै गएका छन् । यसबाट अब नेकपा उनको अवसर अत्यन्त न्यून देखिँदै छ । भूमिगत राजनीति गरिराखेका विप्लवजीले पुरानै शैलीको अवलम्बन गर्ने स्थिति देखिएको छैन । सैद्धान्तिक धारलाई अवलम्बन गर्दै अघि बढेका वैद्यजी विस्तार कमजोर बन्दै गएका छन् । २०५२ सालकै जस्तो सिधा जनतालाई बलिवेदीमा चढाएर राजनीति गर्न सक्ने अवस्था रहेको छैन । प्रचण्डका लागि भूमिगत राजनीति सम्भव छैन । यस स्थितिमा अब प्रधानमन्त्री ओलीजीका खेलौना बन्न प्रचण्ड बाध्य भएका छन् । दलभित्र सानो टुक्रा लिएर उनी दल विभाजनको अवस्थामा पुग्न सक्दछन् र त्यस स्थितिमा आउदो निर्वाचनमा उनलाई उनकै पूर्वकार्यकर्ताले अस्वीकार गर्नेछन् । यसरी निश्चित कार्यदिशा र सिद्धान्तबाट पलायन भई उनीलगायत माओवादीका नामबाट राजनीति गर्ने सबैको राजनीति संकटमा पर्दै गएको छ ।
नेपालका कम्युनिस्ट अमेरिकालाई साम्राज्यवादी भन्दै डिभी भर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने, भारतलाई विस्तारवादीको आरोप लगाउँदै उसैको संरक्षणमा आफ्नो राजनीति बचाउने, गणतन्त्रवादी बन्दै ज्ञानेन्द्रको सरकारका सहभागिता दिने निर्णय लिने, राजालाई दाम चढाई ठूला गणतन्त्रवादी हुने, महाकाली सन्धिमा नेपाललाई बेफाइदा हुनेगरी सन्धि गर्नेहरू ठूला राष्ट्रवादी बन्ने, प्रचण्ड र बाबुराम सुरक्षित रहने भारतमा किरणजी र गजुरेलजी थुनामा पर्ने, मोदी काठमाडौं नआई सिधै जानकीको दर्शन गर्न जनकपुर जाने, हाम्रा प्रधानमन्त्री राजधानीमा स्वागत नगरी नेपालभित्र भारतीय प्रधानमन्त्रीले तोकेको कार्यक्रमलाई स्वीकार गर्ने, सुरक्षाकर्मीहरू भारतबाटै झिकाई भ्रमण सुरक्षित गर्ने, प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीकै सामुन्ने केन्द्रीय सरकारले पेलेको अपमान गरेको सिकायत गर्दा चुपचाप सुनी बस्ने अनि उनी सबैभन्दा ठूला राष्ट्रवादी हुने, आफ्नै दलले सबैभन्दा भ्रष्ट भनेर सार्वजनिक गरेको व्यक्तिलाई जनताले तिरस्कार गर्दा पनि संवैधानिक छिद्रबाट जनताको प्रतिनिधि बनाई अब प्रधानमन्त्री बनाउने बिषयले दलभित्र छलफलले स्थान पाउनु, संविधान संशोधन गरेर भए पनि आफैंले भ्रष्ट बकरार गरेकालाई देशको शासन सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने विषयमा छलफल चल्नु, दुईदुई निर्वाचन क्षेत्रबाट पराजित भएकालाई देशको प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि सबैभन्दा ठूला लोकतन्त्रवादीको दाबी गर्दै निर्लज्ज भइरहनु, दरबारमा गएर समझदारी गर्दै जनताको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्ने, नेकपाका संस्थापकलाई गद्दार भन्नेहरू उनकै फोटोमा पूजा गर्ने, यी सबै क्रियाकलापले यस दल र यसका नेतृत्वपंक्तिमा रहनेमा चरम अवसरवाद हाबी भएकोमा संदेह रहँदैन । यसप्रकारको विवादास्पद र अस्थिरताको पर्याय बन्दै गएका नेकपा विभाजित हुनुलाई अत्यन्त सहजताका साथ लिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले नेपालमा माओवादीको राजनीतिक अवस्था नाजुक र कमजोर बन्दै गएको छ ।
अस्पतालमा बेड नहुँदा २२ जना कोरोना संक्रमित अझै क्वारेन्टाइनमा
सप्तरी, राजविराज । आशंकित र संक्रमितको संख्या बढेपछि सप्तरीमा आईसोलेसन र क्वारेन्टाईन केन्द्रको अभाव भएको छ । शनिबारसम्ममा संक्रमितको संख्या ४२ पुगेपछि र भारतबाट घर...
प्रदेश सरकारलाई चौधरी फाउण्डेसनबाट भेन्टिलेटर हस्तान्तरण
प्रदेश १ Sushila Bishwokarma - August 18, 2020 0
मोरङ । प्रदेश १ सरकारलाई चौधरी फाउण्डेसनले पोर्टेवल भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेको छ । मंगलबार सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेलाई चौधरी ग्रुपका बरिष्ठ प्रवन्धक रामजी...
प्रदेश Dhruba Lamsal - July 17, 2020 0
सप्तरी, राजविराज, । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको पाँच घण्टामै सप्तरीका एक बृद्धको उपचारको क्रममा निधन भएको छ । राजविराज नगरपालिका ६ निवासी ७२ वर्षिय उनलाई...
प्रदेश १ मा अहिलेसम्मकै धेरै कोरोना संक्रमित थपिए
मोरङ । प्रदेश १ मा अहिलेसम्मकै धेरै जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । एकैदिन प्रदेशमा १ सय ४५ जना कोरोना भाइरस संक्रमित थपिएका हुन्...
स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक युवक घाइते
प्रदेश ५ Sushila Bishwokarma - August 10, 2020 0
तुलसीपुर । तुलसीपुरको अश्वारामा स्कारपियोले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक युवक घाइते भएका छन् । घाइेत हुनेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–८ अवारा निबासी टेकबहादुर साहु रहेको ईलाका...
उदयपुरमा १७ हजार घुस लिएको आरोपमा वनका ६ कर्मचारी पक्राउ, २ फरार
Exclusive Kumar Raut - August 11, 2020 0
उदयपुर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ईटहरीले उदयपुरका दुई वन अधिकृत सहित ६ जनालाई घुस लिएको आरोपमा नियन्त्रणमा लिई अनुसन्धान थालेको छ । सप्तकोशी...
खेल Prem Shyangtan - February 22, 2020 0
राजविराज । राजविराजमा संचालन भइरहेको अन्तरविद्यालय टि–ट्वान्टी क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधी म्याक्सेल बोर्डिङ स्कुल राजविराजले जितेको छ । ...
प्रदेश ३ Kumar Raut - March 7, 2021 0
प्रदेश ५ Kumar Raut - September 12, 2020 0
बुटवल । कोभिड–१९ का कारण शिक्षा क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति हुन सक्ने खतरा शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले औँल्याएका छन् । उहाँहरुले लामो समय शिक्षण संस्था बन्द...